MIVERINA TSIKELIKELY AMIN’NY ANDAVANANDRO: Misokatra ny zotra nasionaly, miverina mianatra avokoa ny mpianatra – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 3:06
Manomboka ny zoma izao no hiverina hiasa ireo zotra nasionaly.
Accueil/Politika/MIVERINA TSIKELIKELY AMIN’NY ANDAVANANDRO: Misokatra ny zotra nasionaly, miverina mianatra avokoa ny mpianatra
Mbola mitohy ny Hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, araka ny fanambaran’ny Filoha Andry Rajoelina omaly. Na izany aza, efa nahitam-bokany tsara ireo fepetra rehetra noraisina hatrizay, ka nahafahana nanalefaka ireo fepetra noraisina rehetra ho an’ny 15 andro manaraka. Isan’izany ny fiverenenan’ny zotra nasionaly sy ny fampianarana rehetra.
Lucien R. 31 mai 2021
Roa volana sy roa herinandro katroka omaly ny niverenan’i Madagasikara tao anatin’ny Hamehana ara-pahasalamana. Araka ny nambaran’ny Filoham-pirenena omaly, dia ny volana aprily lasa teo isika no nahazo ny “Pic” na ny trangana Coronavirus betsaka indrindra voamarina. Taorian’izay anefa dia nidina hatrany ireo tranga voamarina ireo, izay nihena antsasany isaky ny 15 andro, raha ny fanazavana hatrany. “Nandray fanapahan-kevitra ara-potoana isika dia nahazo vokatra tsara. Isan’izany ny fanampiana isa ireo CTC-19, eo koa ny Hotel/Hopital, ny fanafarana concentrateurs d’oxygène sy bouteilles d’oxygène, teo koa ny fanapariahana ireo karazam-panafody iadiana amin’ny covid-19”, hoy ny Filoha. Noho izany indrindra no nahafahana nanalefaka ireo fepetra mihatra eto Madagasikara amin’ny ankapobeny. Anisan’ny vaovao lehibe nambaran’ny Filoha omaly ohatra ny fisokafan’ireo zotra nasionaly sy zotra rezionaly rehetra manerana ny Nosy, manomboka ny zoma izao. Afaka miverina mandray ny asany avokoa ireo mpitatitra an-tanety rehetra. Tsy maintsy hajaina kosa anefa ireo fepetra rehetra, toy ny fandrarahana fanafody amin’ny fiaingana sy amin’ny fahatongavana, ny fanaovana arotava, ny fampiasana manifold, sy ny sisa. Etsy ankilany, nilaza ny Filoha omaly fa miverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka ny alarobia izao. Tahaka izany koa ireo mpianatry ny anjerimanontolo rehetra.
Fepetra nambaran’ny Filoha ihany koa ny fisokafan’ny sidina anatiny manomboka ny zoma izao. Tsy maintsy manao fitiliana adin’ny telo mialohan’ny hiaingana kosa anefa ireo mpandeha, hoy izy. Mbola mikatona kosa ny sisin-tanintsika amin’ny sidina avy any ivelany, afa-tsy ireo mahazo alalana manokana efa voalaza tany aloha ihany.
Misokatra avokoa ny fiangonana
Tsy misy intsony ny fihibohana tanteraka eto amin’ny Faritra Analamanga rehefa faran’ny herinandro. Anisan’ny fepetra nambaran’ny Filoha omaly koa io. Ankoatra izay, miverina misokatra amin’ny zoma izao ny Analamanga, Anosy, Matsiatra Ambony, ary Vakinankaratra. Mitohy kosa ny “couvre feu” manomboka amin’ny 11ora alina ka hatramin’ny 04ora maraina eto Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony. Mbola mikatona ny espace sy karaoke. Mahakasika ny finoana, tapaka fa afaka misokatra avokoa ny toeram-pivavahana rehetra, saingy dabilio iray ho an’ny olona iray rehefa misy fotoam-pivavahana. Notsindrian’ny Filoha fa afaka misokatra ny tsenam-pokotany manomboka amin’ny 06ora maraina ka hatramin’ny 06ora hariva.
Mikatona ny CTC-19 sasany
Manomboka ny alarobia izao, mikatona ny CTC-19 eny Soamandrakizay sy ny eny Ankorondrano. Mitohy mandray marary kosa ny eny Andoharanofotsy, Mahamasina ary Village Voara. Mikatona ihany koa ireo Hotel/Hopital nandray marary rehetra. Etsy andaniny, mitohy ny fanaovam-baksiny manerana ny Nosy, izay hatao an-tsitrapo fa tsy an-tery. “Hametrahana toerana fanaovana vakisiny ao Nosy-be sy Sainte Marie hitsinjovana ny fiverenan’ny fizahantany, afaka misoratra anarana ireo olona mihoatran’ny 55 taona misehatra eo amin’ny tontolon’ny fizahantany”, hoy ny fanambarana.
Raha toa ka tsy mbola afaka nivoaka ny faritra mihitsy ireo razana rehetra hatramin’izay, efa afaka mivoaka kosa ankehitriny ireo izay tsy lavon’ny Covid-19, araka ny nambaran’ny Filoha. Mahakasika ireo fepetra fanampiny kosa dia nilaza ny Filoha fa anjaran’ny Governora isam-paritra no mandrindra ny fandraisana ny fepetra mifanaraka ny toe-javamisy any an-toerana, saingy tsy maintsy mahazo fankatoavana avy amin’ny Minisiteran’ny Atitany izay vao azo ampiharina.
« REQUISITION »-N’NY HAINO AMAN-JERY: Tsy misy fanararaotana ataon’ny Fanjakana mihitsy
FIKAMBANANA FITIA: Manolo-tanana ireo vehivavy any Atsimo amin’ny famokarana